ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): နေ့လယ်ဘက် အကြာကြီး အိပ်စက်ခြင်းက ဆီးချို သွေးတိုး ရစေနိုင် ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): နေ့လယ်ဘက် အကြာကြီး အိပ်စက်ခြင်းက ဆီးချို သွေးတိုး ရစေနိုင်
နေ့လယ်ဘက် အကြာကြီး အိပ်စက်ခြင်းက ဆီးချို သွေးတိုး ရစေနိုင်
တစ်နေ့ ကို နာရီဝက်လောက် နေ့ လယ်ဘက် အိပ်စက်ခြင်းက သင့်အတွက် ကောင်းမွန် စေနိုင် ပေမယ့် ဒီ ထက် အချိန် ကြာကြာ ပိုအိပ်မယ် ဆိုရင်တော့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက် စေနိုင် ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျို တက္ကသိုလ်က သုတေသန ပညာရှင်တွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာမှု အရ တစ်နေ့ ကို နေ့ လယ်ဘက် တစ်နာရီ ဒါမှ မဟုတ် တစ်နာရီ အထက် ပိုအိပ်ခြင်းဟာ ဆီးချို ဖြစ်နိုင်မှုကို ၄၆ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမြင့်တက် စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီ့အပြင် နေ့ လယ်ဘက်မှာ အရမ်း အိပ်ချင်သလို ခံစားရတဲ့ လူတွေဟာ လည်း သာမန် လူတွေထက် ဆီးချို (၂) ရနိုင်ခြေ ၅၆ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆီးချိုဆိုတာ သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ကို ခန္ဓာကိုယ်က ထိထိ ရောက်ရောက် မဖြိုခွင်းနိုင်တဲ့ ရောဂါ အခြေအနေ တစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူပေါင်း ၃၈၇ သန်းလောက်ဟာ ဆီးချိုရောဂါကို ခံစားနေ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆီးချိုကနေ နှလုံးရောဂါ၊ ကျောက်ကပ် ပျက်စီးမှု ၊ မျက်လုံး ကွယ်မှုနဲ့ အဆိုးဆုံး အသက်ဆုံးရှုံး ရတဲ့ အထိ ဖြစ်နိုင် ပါတယ်။ သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးတဲ့ အင်ဆူလင်ဟော်မုန်းကို ခန္ဓာကိုယ်က ခံနိုင်ရည် ရှိနေမှုကြောင့် ဆီးချို အမျိုးအစား (၂) ဖြစ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုကို စတင်ခဲ့သူ Dr Tomohide Yamada က “ နေ့ လယ်ဘက် အလွန်အမင်း အိပ်ချင်မှုနဲ့အချိန်ကြာကြာ တစ်မှေး အိပ်တတ်ခြင်းတို့ က ဆီးချို အမျိုးအစား ၂ ဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်တက်မှုနဲ့ ဆက်စပ်နေ တာကို တွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ခဏတာ တစ်ရေး တစ်မော အိပ်တာကတော့ ဒီရောဂါ ရနိုင်ခြေကို မမြင့်တက် စေတာ ကိုလည်း တွေ့ ခဲ့ ရပါတယ်။
“ တစ်ခဏတာ အိပ်စက်ခြင်း ဆိုတာက နှစ်နှစ် ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျခြင်း (deep slow-wave sleep) မတိုင်ခင်မှာ နိုးလာတာပါ။ နှစ်နှစ် ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျ သွားပြီး အိပ်စက်မှု စက်ဝန်း တစ်ခုလုံးကိုလည်း ပြီး အောင်မ အိပ်လိုက်ရဘူး ဆိုရင် sleep inertia လို့ ခေါ်တဲ့ အိပ်ရေး မ၀ခြင်း ပုံစံတစ်မျိုးကို ခံစားရပြီး လူ က မူးနောက်နောက် ဖြစ်နေမယ်၊ စိတ်ရှုပ်ထွေး နေမယ်၊ ပြီးတော့ တစ်ရေး မအိပ်ခင် ကထက်ကို မျက်လုံး ဖွင့်မရအောင် ပိုအိပ်ချင်နေ တာမျိုး ခံစားရ ပါလိမ့်မယ်” လို့ Dr Tomohide Yamada က ပြောပြ ခဲ့ပါတယ်။
Original link - http://technology.thithtoolwin.com/2015/11/blog-post_28.html
Posted by Te Tee at 8:33 PM
Labels: ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ, အိပ်စက်ခြင်း
art and music December 1, 2015 at 11:07 AM
A public school teacher who has half of their art class receive failing grades will still be paid the same at the end of the week. Just visit this site http://www.olhon.org ready in private art instruction world would meanabankrupt business inavery short order. Providing private art classes isabusiness. They must produceagood product or risk not being around in the future.
The major con to private lessons is of olhon course if you cannot afford them for your child.
However this may not be an option if, say you areasingle parent, and www.olhon.org is too much month left after the end of your money.
There are things that you can do to help your local school raise money for their art programs.You can visit this site http://www.olhon.org and thanks ver much.
Of course you have the traditional events to raise funds. A car wash, garage sales, silent auctions, etc. The real make break point for the above types of fund raisers is having the right person in-charge to ensure that all the details are taken care of and everyone is doing what they are supposed to be doing. If no one shows up to the car wash because no one knew about it, it won't do anyone much good. Nor will the dozen cookies at the bake sale.